Myanmar Entrepreneur Group: Glocalization !
Posted by : စိုးထက် - Soe Htet ! Posted @ 7:35 PM
zeRoTraSh July 25, 2008 at 1:12 PM
တစ်လစာ တစ်ခါတည်း ရေးပေးလိုက်ပြီ :D
စိုးထက် - Soe Htet ! July 25, 2008 at 2:04 PM
နောက်ပါနဲ့ ဘကြီးရယ် ... များများရေးပါ များများ ငြင်းရအောင် :P
Nge Naing July 26, 2008 at 6:15 PM
Dr Soe Htet နှင့် အဖွဲ့သားများအားလုံး
အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗဟုသုတ မရှိလို့ Global ကို local လုပ်ဖို့တော့ လွယ်မလွယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် individual လုပ်လို့တော့ သိပ်လွယ်တယ်။ နိုင်ငံခြားစားစရာတွေထဲမှာ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများက Pizza ကို တခြားစားစရာတွေထက် ပိုကြိုက်တာတွေ့ရပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်နဲ့လုပ်စားတဲ့ အီတလီခေါက်ခွဲ Spagitti ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် Global ကို local လုပ်တာမဟုတ်ပဲ individual လုပ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ သူများက အသားအထူးသဖြင့် အမဲသားနဲ့ လုပ်စားတာကို အမဲသားမစားတဲ့ကျွန်မက ပုဇွန်နဲ့ လုပ်စားတယ်။ သူ့မူရင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ အစပ်အဟပ်မရှိတဲ့ ကြက်သွန်စိမ်းနဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ငန်ပြာရည်ဆန်းတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေချက်တဲ့ ဟင်းမှာ မပါရင်မပြီးတဲ့ Mono Sodium Glutamate ( အချိုမှုန့်) ကို ထည့်ဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်သေးတယ်။ ကျွန်မ ပြုပြင်လိုက်တဲ့ Spagitti ကို ဘယ်အီတလီလူမျိုးချက်တဲ့ မူရင်း Spagitti နဲ့မှ ကျွန်မမလဲနိုင်ဘူး။ ရှာကိုလည်သွားတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူများကို သွားကျွေးလို့ ဒါကို Spagitti လို့ဘယ်သူမှ လက်ခံမယ်မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ချက်ထားတာကို လာစားကြတဲ့ ဗမာတွေကတော့ ဆိုင်က Spagitti ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်။
စိုးထက် - Soe Htet ! July 26, 2008 at 6:37 PM
ကျေးဇူး အစ်မရေ ... ကျွန်တော် ဆစ်ဒနီ ရောက် မှ လာစားလှည့်မယ် :P
လင်းမြတ် July 27, 2008 at 11:54 AM
ကျွန်တော် မနေ့က ပြောတဲ့ ရှင်ဇနကာဘိဝံသပြောတဲ့ စကားကဘာလဲဆိုတော့
"မြန်မာ ပြည် လွတ်လပ်ရေးရချင်ရင် ရအောင်လုပ်နေတဲ့ လူ တွေက ငါမဟာဆီမဟာသွေး
ငါကဘာကောင် ငါကဘာမျိူးနွယ် စတဲ့ ငါဆိုတဲ့ အစွဲတွေကို ဖြောက်မှဖြစ်မယ်" တဲ့..။
အဲဒါလေးကိုဖတ်မိရင်းနဲ့ ပေါ့ ကျွန်တော် တွေးမိတာက
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ရာမှာ လည်း
ငါကဘာ မင်းကဘာ သူကဘာ ဆိုတာတွေဖြောက်မှဖြစ်မယ် ထင်လို့ပါ...။ ကျွန်တော်ဒီလိုပြော ရခြင်းကတော့ ကျွန်တော် တို့တွေက မြန်မာပြည် တိုးတက်အောင် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတူပေမယ့် အချင်းချင်း ငါကဘာ သူကဘာ ဆိုတဲ့ ဘောင်တွေခြားပြီး သိပ်မစည်းလုံးဘူး ထင်လို့ပါ။ ကျွန်တော့် အမြင်မှားနေရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် က မြန်မာပြည် တိုးတက် အောင်လုပ်တယ် ဆိုတာ ကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တိုးတက်အောင်လုပ်တာလို့ နားလည်ထားပါတယ်။ ဟိုကောင်တော့ မပါနဲ့ ဒီကောင်တော့ နေခဲ့ ဆိုတာ တွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်ကတော့ ကျွန်တော့် လိုက်မမှီသေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ ဘလော့ ကို အမြဲတမ်း အားပေးနေပါမယ်။